माधव नेपाल एमालेमै फर्किर्दै ! – Kantipur Np
माधव नेपाल एमालेमै फर्किर्दै !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: १५:२८:१९
अष्टलक्ष्मी शाक्यले माधव नेपाललाई ३१ भदौमा एमाले काठमाडौं जिल्ला प्रशिक्षणमा नेता नै भनिन् । धेरै दुःख गरेको पार्टी छाडेर बाटो बिराएको भन्दै फर्कन आग्रह गरिन् ।
माधव नेपाल एमालेमा फर्कनसक्ने सम्भावना छ । तर, त्यो ओलीको नेतृत्वकालमा निकै कठिन छ । ओलीले ३१ भदौको कार्यक्रममा माधव नेपाललाई कुनै हालतमा फर्कन नदिने गरी बोले । उनले भने, ‘माधव नेपाललाई फेरि पार्टी फुटाउन फर्काउने रु’
माधवकुमार नेपाल एमालेमै फर्किनुहुन्छ: योगेश भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माधवकुमार नेपाल एमालेमै फर्किने दाबी गरेका छन्। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमाले फुटाएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० गठन गरेका नेपाल एमालेमै फर्किने बताएका हुन्।
नेपालकै सहमतिमा १० बुँदे बनेको तर पछि उनैले त्यसको विरोध गरेको भन्दै भट्टराईले नेपालको पछि नलाग्न कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरे।
माधव नेपालकै रोहबरमा १० बुँदे सहमति गरेका थियौँ तर पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी पार्टी फोर्नु भयो। यो राम्रो भएन। अरु कार्यकर्तालाई पनि नेपालको पछि नलाग्न आग्रह गर्छु,उनले भने।
भट्टराईले शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भइसकेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। यो सरकार असफल भइसकेको छ। पैँसठ्ठी दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनियता गुमाइसकेकाले अब विकल्प खोजेर एमालेकै नेतृत्वमा चुनावमा जानु एकमात्र उपयुक्त माध्यम होु उनले भने।
माधब नेपाललाई अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन- तपाईले लिएको बाटो ठिक छैन एमालेमै फर्किनुस
अष्टलक्ष्मी शाक्यले माधव नेपालले लिएको बाटो ठिक नभएको बताएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौ जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले नेता नेपाललाई फुटको लाइन ठीक नभएको भन्दै एमालेमै फर्कन आग्रह गरेकी छन्।
‘माधव नेपालले लिएको लाइन ठिक होइन, अहिले फुटको होइन, जुटको राजनीति र सुदृढ एमालेको आवश्यकता छ’, बागमती प्रदेशी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी शाक्यले भनिन्, ‘मेरो प्रस्ट धारणा छ ।
माधव नेपाल हाम्रो नेता हो, तर आज जीवन त्याग गरेको पार्टी छोडेर आन्दोलन अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ यो ठिक होइन, फेरि समिक्षा गर्नुस्, फर्केर आउनुस्, तपाईको भुमिका एमालेमा अझै आवश्यक छ। पार्टी विभाजन गरेर फाइद हुन्न।’
उनले नयाँ पार्टीमा रहेका अरू साथीलाई पनि फर्कन आग्रह गर्दै १० बुँदेले एउटा आधार दिएको बताइन्।
Last Updated on: September 17th, 2021 at 3:28 pm